Firefox 73 ichaunza peji nyowani yekugadzirisa nezve: profiling | Linux Vakapindwa muropa
Firefox 73 ichaunza nyowani nezve: profiling gadziriso peji uye bhatani rekunyaradza vhidhiyo muPiP
Vhiki rino, Mozilla yakaburitsa vhezheni itsva yakagadzika yebrowser yayo. Izvi zvakare zvinoshandura kuita chimwe chinhu: chandinoona sechisingakoshe ndechekuti iyo beta shanduro inokwira kumusoro, asi kuendesa kwepamberi kwakatangwa kuri mune ino kesi Firefox 73. Nhasi, Mozilla yakafambira mberi shanduko mbiri dzinozouya kune iyo vhezheni yebrowser iyo ichavhurwa muna Kukadzi uye iyo yatinogona kuyedza kana tikaburitsa Firefox Husiku kubva Iyi link.
Yekutanga yeshanduko iri idzva rekugadzirisa peji. Yakave ichiwanikwa kubvira yekupedzisira Husiku vhezheni, saka hatichazviona kunze kwekunge tavandudza izvozvi. Iyo peji iri nezve: kunyora ndokutanga kukakavadzana mubugzilla anenge mavhiki matatu apfuura. Icho chitsva icho chatichataura nezvacho gare gare shanduko diki kwazvo, asi iyo iri yechokwadi kukosheswa nevanozvidya vanodya masevhisi seYouTube.
Firefox 73 ichasvika muna Kukadzi 11
Pakati pezvinhu zvatinogona kuita pane peji nezve: kunyora, parizvino muChirungu chete, tine zvinotevera:
Izvo zvishoma nezve: profiling peji rinogadzira iyo peji uye jekiseni iyo UI irimo mairi, saka mashini anoshanda panzvimbo. Iri basa ndere kudzikisa zvivakwa, zvine shanduko diki kune iripo mushandisi interface.
Imwe shanduko yavakataura uye iripo kubva nhasi ichaonekwa muPikicha-mu-Mufananidzo. Kusvika pari zvino, pataka "bvisa" vhidhiyo kubva kumasevhisi seYouTube, isu takangoona mabhatani maviri: iyo yekudzorera hwindo uye "kuinamatira" kudzokera kune yekutanga webhusaiti uye iyo yekumisa vhidhiyo. Kutanga nhasi, isu tinogona zvakare mbeveve vhidhiyo.
Ini pachangu, ndinofunga izvozvo Mufananidzo-mu-Mufananidzo Firefox ichiri kuda kugadzirisa zvishoma. Kutanga, hwindo idiki kwazvo kana tichinge tamboibvisa zvekuti tinogara tichifanira kuchinjisa zvishoma. Ini ndaizokumbira Mozilla kutanga zvishoma zvishoma. Kune rimwe divi, ndinofunga zvaisazokuvadza kana vakawedzera diki yekufambira mberi bara kuti vakwanise kufambisira mberi kana kunonoka vhidhiyo kusvika patinoida, asi handizive kana izvi zvichizobvunza zvakawandisa nekuti izvi mu kunyanya chimwe chinhu chandisina kuona muChannel kana mamwe mabhurawuza. Muchokwadi, iyo Google browser inoramba ichipa mabhatani maviri kana vhidhiyo yabviswa uye isu hatina bhatani rekuivhura, saka tinogona kuti PiP yayo yakaipa kudarika iyo yeFirefox.
Chero zvazvingaitika, shanduko idzi dzinowanikwa kubva 11 yeFebruary, panguva iyo Firefox 73 yakavhurwa zviri pamutemo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Firefox 73 ichaunza nyowani nezve: profiling gadziriso peji uye bhatani rekunyaradza vhidhiyo muPiP
Iwe haufanire kugara ne "Ini ndaizokubvunza iwe ...", muMozilla browser Batsira iwe unogona "Tumira maonero ako" nezvazvo, zvinogona kutora nguva kuti uone kana chiri chekuwedzera kukosha, asi kazhinji iwe uri kwete iye chete mushandisi anobvunza chimiro chimwe chete, saka unovabatsira kutora zano kurangarira kana vazhinji vari kuchikumbira uye nekuvandudza kuwanikwa kweye browser (mune ino kesi).
Kutsva kutsva kunogona kubvuta VPN kubatana muLinux
EndeavorOS Inosunungura Gumiguru Yakagadziriswa Shanduro muna Zvita